Etu esi akpọ ndi mmadu ka ha bia na Telegram dị iche iche nwere koodu QR | Gam akporosis
Ngwa izi ozi Telegram na-enweta ala kemgbe Jenụwarị, niile mgbe ekwuputachara WhatsApp na iwu nzuzo ya ama ama nke ga-amalite na ọnwa Mee. Maka ihe a niile, ngwá ọrụ ahụ na-ewebata ọtụtụ akwụkwọ ọhụụ nke mere ka ọ dịrị n'ihu asọmpi a na-atụle.
Otu n'ime ihe ndị na-ewu ewu na Telegram bụ otu dị iche iche, nwere ikike kachasị nke ihe ruru mmadụ 200.000, ha niile n'echefughị ​​ọrụ nkata olu na-atọ ụtọ. A na-ejikarị ịkpọ oku dị iche iche ịkpọ oku, ma ọ bụghị naanị ụzọ isi tinye ndị mmadụ.
Telegram na-enyekwa ohere ịkpọ ndị mmadụ ka ha bịa otu nwere koodu QR, nke a bụ nhọrọ ngwa ngwa n'ihi na naanị ha ga-agụ koodu iji nweta otu ahụ. Mepụta koodu QR dị mfe, maka nke a ị nwere nkuzi a iji mepụta otu ibe weebụ, ọwa Telegram yana otu.
Etu esi akpọ ndi mmadu ka ha bia na otu ihe na Telegram nwere koodu QR
Maka nke a, ọ ga-adị mkpa ịkekọrịta koodu QR nke otu, ma obu ohuru ma obu onye ebe ichoro inwe ikike kwesiri. Ozugbo ị banyere ozi nke otu ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịmata ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị nchịkwa, ọ bụrụ na ị bụ, ị ga-enwe olu ma tụlee votu niile mgbe ị na-achịkwa ya.
Iji kpoo ndi mmadu ka ha bia na otu ihe na Telegram nwere koodu QR ị nwere ike ime ya n'ụzọ ndị a:
Mepee ngwa Telegram na ngwaọrụ gam akporo gị
Pịa na aha otu ahụ iji tinye ozi ya, cheta na ị ga-abụrịrị onye nchịkwa iji nwee ike inweta koodu QR, pịa pensụl dị n'elu
Ozugbo ị pịrị na pensụl ọ ga - egosi gị ọtụtụ nhọrọ, pịa na "vkù njikọ"
Na "Njikọ na-adịgide adịgide" pịa ebe atọ kwụ ọtọ, ugbu a ọ ga - egosi gị windo ọhụrụ: "Nweta QR code" na "Kagbuo njikọ", pịa nke mbụ wee pịa "Share QR code", ziga ya ugbu a ịchọrọ, ma ọ bụ site na WhatsApp, Telegram, Twitter, Bluetooth ma ọ bụ site na email
Onye ọrụ ga-agụ QR koodu ịbanye otu na ị kpọrọ n'oge ahụ, ọ dị mma iji zere ịkpọku ya site na njikọ nkịtị, ọ bụ otu n'ime atụmatụ Telegram ọhụrụ agbakwunyere yana ndị ọzọ dị na Beta
Ikike ikpo oku site na QR code dị ugbu a na ụdị Beta, onye kwụsiri ike ga-enweta ya na izu ndị na-abịanụ. A ga-agbakwunye ike a na-ebibi nkata nkeonwe na ndabara, enwere ike ihichapụ ozi site na 24 ruo ụbọchị 7 (otu izu).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi akpọ ndi mmadu ka ha bia na Telegram dị iche iche na koodu QR